मनोज गजुरेलसंग सम्बन्ध विच्छेद पछि मिनाको यस्तो व्यवसाय - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
५ माघ २०७४, शुक्रबार ०८:०० 145
शुक्रबार डिजाईनर मिना ढकालले नयाँ बानेश्वरमा बुटिक उद्घाटन गर्दैछिन् । केहीवर्ष अघि बागबजारमा बुटिक सञ्चालनगर्दै आएकीमिनाले बीचका केहीवर्षमाभने यो कामबाट ब्रेक लिएकी थिईन् । केही समय अघिको कुराकानीमा उनले छोरी किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका कारण उनको रेखदेखको लागि आफूले कामबाट ब्रेक लिएको बताएकी थिईन् । अहिले छोरीसँगै नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएकीउनले ‘आमा छोरी ट्रेण्ड’ नामक बुटिक सञ्चालनगर्न लागेकी छिन् । उनको बुटिक उद्घाटनको अवसर पारेर आज प्रभात लामाले मिना गजुरेल अर्थात मिना ढकालसंग आजको गफगाफ गरेका छन् । प्रस्तुत छ मिना ढकालसंगको आजको गफगाफ:
बुटिकफेरि शुरु गर्नुभएछ त?
बुटिक पहिला पनि थियो । अहिले फेरि शुरु गरेँ । यो बीचम ाबाहिर गएँ । एक दुई महिना । घरको केही समस्याले गर्दा पनि बुटिकको काम रोकियो केही समय । अनि फेरि गरिराखेको काम । मैले फेशन डिजाईनिङ्गको दुई वर्षिय कोर्स पनि गरेको छु । घरमा किन यत्तिकै बस्ने भनेर शुरु गरेको ।
बिचमा किन रोक्नुभयो?
बिचमा एक दुई महिनाम यु.क ेगएँ । त्यो पछि घरको विविध कारण र केही समस्या आयो अनि छोड्नुपर्न भयो ।
नयाँबुटिकको नाम के राख्नुभएको छ?
बुटिकको नाम यही राख्ने भनेर सोचेको छैन । पन्ध्र दिनजतिभयो । बुटिकको ओपनिङ्ग गरिहालाँै । किन ढिला गर्ने भनेर कार्ड बनाउन जादाँ नाम के राखौँ भन्दाभन्दै आमा छोरी नाम रहन गएको छ ।अहिले हामीआमा छोरी मात्र बसिरहेको छौँ । त्यही भएर हामीले‘आमा छोरी ट्रेन्ड’नाम राखेका हौँ । ।
यहाँ क–कस्को लागि कपडा पाईन्छ?
यहाँ सानो बच्चाको पास्नी देखि लिएर हजुर बुबा,हजुर आमा, छोरा,भतिजादेखिलिएर सबैको लागिपाईन्छ । बेहुला बेहुलीको कपडा पनिपाईन्छ । बुटिकको ओपनिङ्गपौष ५ गतेहुँदै छ । यसमाविशेष अतिथिकोमलवोलीदिदी, दिपाश्री निरौला, नेपाल टेलिभिजनको समाचार वाचिकाअनिताविन्दू हुनुुहुन्छ ।
आमा छोरीको मात्र सङ्लग्नता हुँदा गाह्रो सारो के कत्तिको हुदो रहेछ ?
सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । गाह्रो भएको समय सकारात्मक सोचले सबै हटाईदिन्छ । गाह्रो साह्रो केहीपनिभएको छैन सजिलो नै छ ।
पहिला र अहिलेको तुलनामा यो काममा अझै सहज हो कि अप्ठ्यारो हो?
मलाई कामको अनुभव भई सक्यो तीन वर्ष जतिको । कहिले काही नेपाल बाहिर गएर सामान लिएर आउनुपर्ने हुदाँ चाहि कहिले काही अप्ठ्यारो हुन्छ । काम गर्नेहरुले बिचमा धोका दिनपनि सक्छन् । त्यो बाहेक खासै समस्या केहीपनि छैन ।
पहिला बुटिक सञ्चालनगर्दा को–को कलाकारको कपडा डिजाईन गरिदिनुभयो ?
मैले कलाकार मध्ये ऋचा घिमिरे, नेपालको ७ ईन्डियाको ३ जना सुपर मोडल, दिपाश्री निरौला देखि लिएर अन्य केहीकलाकारको लागि डिजाईन गरेँ ।
उहाँहरुको प्रतिक्रिया के कस्तो आउँथ्यो?
उहाँहरुले भाउजुको क्रियशन राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो । आजकाल बुटिक भन्ने बित्तिकै इन्डियाबाट सामान ल्याएर बुटिक भन्ने प्रचलन धेरै आएको छ । तर, मैले कपडा मात्र राखेको छु त्यसमा डिजाईन र क्रियशनगर्ने सोचिरहेको छु ।
बुटिक भन्ने बितिक्कै एकदमै महगो हुन्छन् भन्ने सोच्छन नि धेरैले ?
बुटिक महगो त होईन । हाम्रोमा सामान सबै ईन्डिया, चाईनाबाट आउँछन् । उहाँहरुको देश नै ठूलो । हाम्रोमाखासै सामानको प्रयोग पनिहुदैन । नेपाली ढाकाको कोट देखि ब्लाउज सम्म सबै मेरोमातयार हुन्छ । रेडिमेड सामानमगाउँदाबाहिर बाट सस्तो पर्छ । तर, हामीले कपडा ल्याएर पसलको भाडा चालिस पचास हजार छ । मेरो महिनाको खर्चमात्र एक लाख हुन्छ । त्यो माथि कटिङ, हेमिङ्ग, डिजाईनगर्न देखि लिएर कामगर्न छुट्टा छुटै व्यक्ति हुन्छन् । एउटा कपडा तयार पार्न८ देखि १०जनाको भूमिका हुन्छ । सबैको पारिश्रमिकजोड्दा एक लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । बुटिकमा रेडिमेड लाउँदा डिजाईन जुधेको हुन्छ । हाम्रोमा एउटा सँग अर्को जुधेको हुँदैन । क्रियशन र कपडा देखिलिएर सबै कुरा नयाँ हुन्छ । त्यो भएर फरक हो मंहगो होईन ।
यो सेलिब्रिटीको लागि डे्रस डिजाईन गर्न पाएहुन्थ्यो भन्ने छ?
मलाई फलानोको भन्दा पनि सबैको गर्नु मन छ (लामो हासोँ) । म बच्चा देखि नै फेशनमा ध्यान दिन्थेँ । मैले चिनेको सेलिब्रिटीलाई यो पार्टीमा यस्तो पहिरन लगाउनुपर्यो भनेर भन्ने पनि गरेको छु । उहाँहरुले त्यसलाई सकारात्मकर नकारात्मक कस्तो रुपमा लिनुहुन्छ त्यो भने थाहा भएन ।
नेपाली आर्टिस्टमा ड्रेस अप सेन्स कतिको छ ?
एकदमै हाई फेशन सेन्स देखेको छैन । अहिलेको जेनेरेशनमा छ । पुरानोमा भने खासै छैन ।
तपाई कलाकारको नजिक पनि हुनुहुन्छ ड्रेस डिजाईनको अफर कत्तिको लिनुहुन्छ या हुन्न?
लिन्छु । पहिला पनि एक दुई वटा गरेको छु ।
काममा नानीले कतिको सपोर्ट गर्छिन् ?उसको ईच्छा पनि यसमा नै छ ?
अहिले त ऊ कक्षा ८ मापढ्छे । सपोर्ट नै छ । उसलाई अरुभन्दा पनि मेसिन चलाउने भने ईच्छा छ । मलाई कपडा सिलाउन सिकाईदिनु न भन्छे ।
नानीलाई के बनाउने रहर छ?
नानीलाई सबैले डाक्टर, ईन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्छन् । तर सबै जनाविदेश गएको देखिरहेको छु । जागिरपाउनगाह्रो छ । त्यहीभएर उसलाई सि.ए पढभनेको छु । उसले अघिल्लो वर्ष सम्म हुन्छ भन्थिअहिले भने थ्रिएटर गरेर हलिउड÷बलिउड जाने ईच्छा देखाएकी छ (हाँसो) ।
नानीले बाबालाई (मनोज गजुरेल ) कतिको मिस गर्छिन?
गर्छिन् । छोरीले आमाबाबालाई मिस नगर्ने भन्ने नै हुँदैन ।
मङ्गलममा साम्राज्ञी कस्को पृथ्वीराज प्रसाईको कि पुष्प खडकाको ?
मैले कुमार दाईको त्यो टिउन यस अघि पहिले कहिले सुनेको थिएन —टंक बुढाथोकी